नेकपाको अगाडिको बाटो: समाजवादका निम्ति संघर्ष - Nepal Readers
आउने पुस्ताले यो संविधानको पूजा गरेर बस्छ कि हेरेफेर गरेर परिवर्तन ल्याउँछ, हेर्नुपर्छ । हाम्रो त यात्रा समाजवादको हो । हिजो सशस्त्र संघर्ष गर्नु ठूलो कुरा थियो । बगिरहेको नदीको उल्टो धारमा हिँड्नु जस्तै । अहिले नयाँ पिँढी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा किन आउँदैन ? हाम्रो बाटोलाई, आदर्शलाई किन उपेक्षा गर्छ रु हाम्रो भनाइ र गराइको अन्तरविरोध अनि यथार्थमा हाम्रो आत्मनिर्वासन देखेर हो कि?
पुँजीवाद असाध्यै अजंगको छ, असाध्यै बलियो छ । त्यो पुँजीवादसँग लड्न सक्यौ भने जित्छौै । जित्यौ भने समाजवाद कायम हुन्छ, अन्यथा सत्यानाश हुन्छ । युवा पिँढीले त हो चीनमा त्यति ठूलो युद्ध लड्यो, तातु नदी पार गर्यो । हजारौँ हजार माइलको यात्रा गर्यो । आज त्यही चीनमा एउटा आइप्याडका निम्ति एउटा युवाले आत्महत्या गर्यो । पिँढी त युवा पिँढी नै हो । नेपालका युवा पिँढीलाई यो परिस्थिति बताउनुपर्यो ।
यो क्रममा जनताबाट हामीले अनुमान नै नगरेका नयाँ जुक्ति र काइदा प्राप्त हुनेछन् । त्यसका आधारमा शिक्षासम्बन्धी सोच, प्रणाली र ढाँचा विकसित गर्नुप९यो । अहिले कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि धेरै वस्तुमा परनिर्भर छौँ । यसमा किसानलाई सहभागी गराई दूध, दही, घिउ, चामललगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेछ । यसका निम्ति किसानहरूको सल्लाहलाई विश्लेष गरी किसान नीति र भूमि नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अधिनायकवाद के हो?
उसलाई लागेको छ, यो प्रचारले नेपाली जनता कम्युनिस्टदेखि झस्किन्छन् । त्यसैले कुनै आधार नभए पनि कांग्रेसले मनोवैज्ञानिक टक्करका निम्ति अधिनायकवादको खतरा भन्ने नारा निरन्तर उरालिरहेको छ । हामीले भने हामी पुँजीवादीभन्दा प्रजातान्त्रिक छौँ भन्ने सत्य जीवन–व्यवहारद्वारा प्रमाणित गर्दै जानु पर्नेछ । राम कार्कीकाे याे लेख हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हाैं।